Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ngwaahịa SD-RS-P12 dị elu Wistron
Mkpakọ Nguzogide: 10-20 tọn
Ogwe okporo ụzọ plastik, ma ọ bụ akpọrọ ihe nrịbama pavement, bụ ngwaọrụ nchekwa okporo ụzọ dị mkpa nke nwere ike ịkwalite ọhụhụ ha site na iweghachi ọkụ ọkụ ụgbọ ala iji duzie ụzọ n'okporo ụzọ n'ọnọdụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Na obodo ụfọdụ, a na -eji ha dị ka ndị na -agbawa ọsọ ọsọ na ọdụ gas, ụlọ akwụkwọ na n'okporo ámá obodo wdg wdg Roadsky bụ ọkachamara na -emepụta ihe nrịbama pavement nke nwere ike ịnye oghere okporo ụzọ plastik ahaziri maka mkpa dị iche iche.
Aha ngwaahịa Plastic Road Stud
Mkpokọta Nrụgide 10-20 tọn
Agba White \_ amber \_ red \_ green \_ acha anụnụ anụnụ
Ogo katọn 45*28*17cm
1. Ihe nrịbama pavement a na -atụgharịgharị echegharị nke ejiri plastik dị elu rụọ yana nrụgide siri ike, ujo na nguzogide okpomoku dị elu.
2.Efe ka etinye ya
ya na gluu AB n'okporo ụzọ.
3.The dị iche iche na agba ìhè nwere ike reflective mmetụta na -eme ka obodo mara mma dị ka mma. 4.Ndị na -adịgide adịgide na -enye ọhụhụ ehihie na abalị na mpaghara ntụgharị ọsọ ọsọ, mpaghara ihe mberede, mpaghara gbara ọchịchịrị, mpaghara na -ejikọ okporo ụzọ na oghere dị n'etiti, ọkachasị n'oge ọnọdụ adịghị mma dị ka igwe ojii, mmiri ozuzo na ọchịchịrị.
Nke gara aga: Plastic Road Stud SD-RS-P5
Mbadamba Glass Road Stud
Nduzi okporo ụzọ Led
Anyanwụ okporo ụzọ Aluminom
Oghere okporo ụzọ Solar agbakwunyere
Anyanwụ Glass Road Stud